Rio de Janeiro - I LOVE RIO- AMASIKO
I LOVE Rio nothando isiko, futhi ubheka ukumboza ingcebo enkulu lokusungula wobuciko glitters ngaphesheya komuzi, zonke izinhlobo zawo zendabuko kanye ezintsha futhi Izinkulumo.
Repertoire Rio de Janeiro of isiko wendabuko uchazwe, kuhlanganise ifilimu imikhosi, yaseshashalazini imikhiqizo, art Imibukiso, futhi dance imibukiso. Ukubonakaliswa Ingcweti kusukela yaseshashalazini Posh productions ukuba eyiqiniso favela ingcebo tikhombise abafundi, unezela ukuthungwa okukhulu kuphothifoliyo amasiko leli dolobha.
CARIOCAS umphefumulo Rio
'Isiko' kuyinto term evulekile futhi uketshezi okubhekisele utho ezivezwa ingqondo womuntu. Kuhlanganisa art bendabuko, ezifana ifilimu, yaseshashalazini, umdanso kanye nemibukiso, kanye kwansuku ukuzilibazisa ngayiphi indlela essence uhlamvu a labantu. Rio de Janeiro ecebile ngempela heritages nokwehluka, yokuxuba futhi input.
Uma Rio de Janeiro efika engqondweni, khona inala izithombe: emabhishi acwebile, soccer, zomkhosi, inyama eyosiwe, futhi kazwelonke isiphuzo caipirinha - kodwa, ngaphezu kwanoma yini, kuba abantu bomuzi ezenza Rio kuyini.
Ngokuthi Cariocas, abakhileyo rio sika zakha kakhulu ngamasiko group ezihlukahlukene, njengoba zivela heritages ezahlukene, amasiko nezivumokholo - benezici elingenakuphikwa ukusondelana isiko ndawonye: i kwemizwa jikelele okuhle, uthando ukuphila, ubungane, futhi afudumele izihambi.
Vula futhi basamukela, Cariocas ziyingxenye ebalulekile ye yini eyenza Rio endaweni ethandwa enjalo: inhlakanipho ngokwemvelo oqhakazile, abantu Rio kukhona okwehlukile distinguishable by smile lwangempela yabo, spontaneity kanye nemvelo banelukuluku lokwazi.
Central oboniswa isiko Carioca iyona ebalulekile Siyethemba ukuthi umndeni nabangane ukudlala zibe munye ezimpilweni yomunye: zokuzalwa njalo kugujwa uzungezwe abangane abaningi kanye by the enwetshiwe umndeni, futhi yisiphi isenzakalo Ithuba ephelele ukuze uthole ndawonye futhi bachithe. Ezemidlalo, umculo, kanye bengaphandle libalele kungcono abakujabulela barbeques inkampani yabanye, futhi isonto-sekupheleni okuyisisekelo lokuphila wendawo.
Ingxenye ifilosofi lendawo nesithakazelo esiqotho ekufundeni ngezindlela kanye Imikhuba nezinye izingxenye zomhlaba, futhi bawafaka izakhi eziningi ezintsha wendawo amasiko landscape, enikeza owabeletha izinkulumo Carioca ikakhulukazi ezifana uhlobo lomculo Bossa Nova futhi ezihlukahlukene ukudla, wobuciko, futhi amagugu tetemibhalo.
Esinye isici ukuthi izimisele Cariocas umoya wabo abahlukene yazo nifaka amathonya bezizwe ezihlukahlukene isitayela ebukekayo futhi ukudlala.
Kuleli khulu leminyaka elidlule, umkhathi ukuphumula, nezindawo ezinhle futhi evulekile ezithandayo abantu Rio abé 'muse' ngokuba mkhulu abalobi, izimbongi, futhi abaqambi ezifana Tom Jobin noVinicius de Moraes, Abadali oluyingqophamlando Bossa Nova ingoma 'Garota de Ipanema' (Girl kusukela Ipanema).
Lezi izici efanayo edolobheni ukhangwa ezinye abaculi abanamakhono kakhulu emhlabeni wonke, futhi kwabaningi capital womuntu uye ethunywe intuthuko lokukwazi in the amasiko ukukhiqiza of the city.
Adume kakhulu futhi ebonakalayo omhlaba Inkulumo ka Carioca isiko Zomkhosiumbukwane ngempela celebration olwenzeka njalo ngonyaka: izinkulungwane abahlali wokuhamba kanyekanye parading izingubo eyinkimbinkimbi kakhulu umsindo Samba umculo.
World odumile emhlabeni wonke amashumi eminyaka, Zomkhosie Rio kuyinto sasendle ngempela futhi umbukwane wezinsuku ezinhlanu-celebration, ezihilela izigidi zabantu, futhi angewona umuntu, akuyo yonke ngxenye yedolobha, imini ebusuku. Okizo izinsuku 40 ngaphambi kwe-Easter, Zomkhosingokusemthethweni uqala ngoLwesihlanu futhi emikhawulweni ngoLwesibili fat. Nokho, pre-Zomkhosiimikhosi uqale ngaso okungenani isonto elilodwa kusengaphambili, futhi uqhubeke kuze Sunday emva fat ngoLwesibili.
Zomkhosiin Rio de Janeiro kuhlehlela emuva 17 Ngekhulu, lapho izikhulu isiPutukezi aphethwe izinhlangano kanye imikhosi ezisekelwe emasikweni abo ezihloniphekayo European. Ngokuhamba kwesikhathi, le mikhosi amuncwa izakhi ezithile ukuba isiko Indigenous futhi Afrika, kanye kwagcina ngo Kwakuhlanganiswa eyingqayizivele futhi umbukwane kakhulu kakhulu kuthonywa Temdzabu Afro-Brazilian.
Beyond Zomkhosi, eRio de Janeiro a kwaziswa Izinkulumo wobuciko kanye kwansuku Iyaphela beqalaza edolobheni nsuku ngonyaka, ngokuvamile liphefumulelwe umuzi ngokwawo kanye phambi abaculi ezingenakubalwa, abalobi, nabaculi.
Ezibalulekile Ikakhulukazi Rio de Janeiro, ezitolo ezidayisa pepper emigwaqweni emzini, ibamba ukubhekana nezinto eziningi ezibalulekile izenzakalo wobuciko, ezifana ncwadi ukwethulwa, ukufundwa, recitals futhi izingxoxo. Ziyakwazi izikhala ngokuxuba, lapho abantu kwansuku, abaculi, futhi nezihlakaniphi ukuhlangabezana abuye abelane ngemicabango, futhi lapho izincwadi futhi art nhlanganisela kanye ikhofi, ukudla, umculo, ezokungcebeleka kanye mpikiswano.
Rio futhi iye yathuthukiswa ukunconywa phezu mashumi eminyaka iqhaza layo emhlabeni zobuciko. Lokhu ngokwengxenye kubangelwa ukutshalwa kwezimali zomphakathi kanye nezizimele in zemibukiso kanye nemibukiso yonkana idolobha: the Museu de Arte do Rio (Rio Art Museum) sivulwe 2013, futhi Kuqhutshwa nemibukiso esimnandi nezenzakalo unyaka. The Museu de Arte Moderna (Museum of Modern Art), kanye Centro Cultural Banco do Brasil (Bank of Brazil Cultural Center), futhi anikele Uhlelo nemibukiso omhlaba waqaphela.
Esinye isici repertoire Rio amasiko zalo yaseshashalazini. The Teatro Municipal, noma Theatre Municipal, ingenye kwezakhiwo eziningi yesiteleka emzini. Akhiwa in the style baraque in Cinelandia 1909, ngokuyinhloko liveza classical amakhonsathi, opera futhi ballets, kanye abanye yaseshashalazini zomculo. The OI Institute futhi umise up yeshashalazi amabili e omakhelwane of Flamengo kanye Ipanema, egijima a ingcebo ezahlukene lokwentiwako wobuciko, ukuhlinzeka i olunzulu Uhlelo yaseshashalazini for izethameli abasha nabadala.
Isiko womuzi kungabuye kuchazwa Imisebenzi yansuku zonke kanye ukuziphathisa kwabantu bayo. Art Graffiti, namabhodi okushibilika, ukudoba kanye ikhayithi endizayo Izingxenye ezisemqoka wesimanje Carioca ukuphila, kuhlanganise kanti amagama athile, kunyakata kwemtimba, bathanda nokuthambekela yakha Indwangu ngekuhlanganyela a ocebile futhi umphakathi okunobunye.
The Jeito Carioca, noma Carioca indlela, yigama odumile lisetshenziselwa ukubonisa indlela creative, emihle newukuhlakanipha ukuthi abantu Rio ndlela nezingqinamba adversity.
Lezi zimo zokuma ziyaphuma okuningi kusukela izindawo yezicebi edolobheni njengoba benza kusukela emiphakathini phezu Rio sika emagqumeni. Favelas babe imilando eside, ehlukahlukene kanye elizwakalayo namasiko okuyinto ziyaqhubeka baneqhaza sezithandwa izilomo kumiswa uhlamvu dolobha kubalulekiler.
Ukwenyuka ukuthuthukiswa kanye nokutshalwa kwezimali emzini ziye zaholela kudalwa izenzakalo adliwe isihambile izincwadi, amafilimu kanye art esiteji global, futhi lanwetshwa ukufinyelela isiko phakathi kwabakhileyo Rio sika.
UMkhosi Rio, olwaqala ngo-1999, ungomunye ebaluleke kakhulu imikhosi ifilimu in the world futhi uye tikhombise ezinye ithalenta kunabo isiqondiso, kuhlanganise Costa Gavras, uJoão Pedro Rodrigues, futhi abadlali edumile emhlabeni ezifana Samuel L. Jackson, Jeremy Irons futhi Helel Mirren.
Umuzi Kuqhutshwa incwadi fair international, lapho abamemezeli, booksellers abalobi, Ongoti, futhi abathanda ubuthe ukuba ukuthola futhi nixoxe izincwadi, ukunikela isikhala for inkanuko futhi ukuxhumana ethelayo phakathi nezihlakaniphi kanye nomphakathi ngobubanzi.
Unyaka ngamunye, Rio liphetheni Anima Mundi, izithombe film festival ukuhlolwa groundbreaking futhi sihehe animated motion izithombe kusukela embulungeni yonke. Waqaphela by the sokuqeqesha international we Oscars, kuba izithombe wumcimbi eLatin America, esiziphatha njengoFakazi a platform for the abaculi entsha futhi original kakhulu ensimini.
Esinye ngempelasonto ngayinye ebusika, abadwebi, Okugweda futhi abaculi etibonwa aphonse ukuvula iminyango emakhaya abo futhi studios in the sezimboni creative of the city - kwentaba amahle bohemian ezingomakhelwane Santa Teresa - for ngesenzakalo esibizwa ngokuthi Arte de Portas Abertas (Open Doors Art).
Kusukela 2003, Rio de Janeiro uye wasingatha ehlonishwa kakhulu FLIP umkhosi edolobheni ebukekayo futhi esingokomlando Paraty. The International Festival of Literature esilethe ndawonye ezinye umhlabeleli-wayemthanda futhi wamenyezelwa ngelihlo abalobi wesimanje, kuhlanganise Julian Barnes, Don DeLillo futhi Hanif Kureishi
Eqokomisa isici benkolo Rio de Isiko Janeiro sika, kwesithombe yisakhiwo sodumo UKhrestu ufaneleka esabekayo phezu komuzi, efanekisela ngifakaza otweni uxhumano ibangelwa phakathi Cariocas futhi ukholo lobuKristu - wayefanekisela kanye izingalo gengelezi, lesikhumbuzo ukhumbuza wonke izivakashi uhlobo basamukela yomuzi kanye nabantu bayo.
Brazil iyizwe kakhulu zenkolo, futhi ngenxa ukuhlukahluka labantu bayo, ngokuvamile izinkolo nifaka namathonya esuka ebuKatolikeni, zamaProthestani, kobuqaba, European Nemimoya, Izinkolelo Indigenous futhi izinkolo African amasiko - siphakamise ukuvuleleka eyisibonelo nokuhlanganiswa namasiko kokubili Rio de Janeiro futhi izwe lonke.
The amathonya amabili evelele kakhulu kwi ukholo labantu bakaJehova kukhona ubuKristu European, futhi amasakramente futhi amasiko bafudukela ezweni kanye nezigqila zase-Afrika. Kuze kube maphakathi nekhulu le-20 phezu 90% of baseBrazil babengamaKatolika, okwenza izwe zwe elikhulu kunawo zamaKatolika emhlabeni, nge ngokushesha ukukhula Evangelical kobuProthestani eminyakeni engu-50 edlule.
Ngamaholide zenkolo imikhosi zenzeke unyaka in bazohlonipha abangcwele futhi izinsuku ezingcwele enkulu ukubaluleka in folkloric Brazilian nomlando Catholic. Zonke kulo June, July no izingxenye August, Rio kudlala ezahlukene yempi amaqembu ongaphandle futhi endlini behlonipha abangcwele ezibalulekile, imbuing the Imikhosi Catholic kanye Brazilian yendabuko kanye Afro-Brazilian music and cuisine, ezifana forró umculo futhi ezihlukahlukene bendabuko izitsha kazwelonke.
Njalo ngxenye yedolobha is ezobhekwa, ukuletha abafundi izici zamasiko cityscape okuyinto kancane eyaziwa noma kuqondwe.
Kanye izibuko futhi ukusebenza, Iwebhusayithi imininingwane ukuzilibazisa zansuku zonke wengeze nekhangayo futhi uhlamvu kuya idolobha, kusukela ikhayithi ezindizayo art graffiti, amakilasi dance Carioca unique izinkulumo, isimo sengqondo kanye ukuziphathisa.